Daily Nation oo bannaanka soo dhigay raja-xumada Kenya ee sheegashada Badda Somalia | Hadalsame Media
Home Maqaallada Daily Nation oo bannaanka soo dhigay raja-xumada Kenya ee sheegashada Badda Somalia
Daily Nation oo bannaanka soo dhigay raja-xumada Kenya ee sheegashada Badda Somalia
(Nairobi) 30 Sebt 2019 – Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoraya in Kenya ay ku guuldarreysatay inay Soomaaliya heshiis saaxiibtinimo la gaarto.
Wargeyska wuxuu xusay in Soomaaliya ay cuskaneyso qaynuun-gudeedkooda -oo ay ku jiraan Sharciga Dhul-badeedka Kenya ee 1972 iyo Xeerka Aag Biyeedka ee 1989 – ay Soomaaliya u gacan-gelin karto aagga lagu muransan yahay, taas oo ay sii dheer tahay in Malaayiin doollar ay ku bixin doonto mag-dhow ay siiso Soomaaliya.
Kenya waxay ku dhowaad 29 Milyan ku khasaarisay wada-xaajoodka oo 50 xubnood ay ku matalayeen, halka Soomaaliya ay ka socotay 2 xubnood oo kaliya. Wargeysku ma sheegin lacagtaas sida ay ku baxday, waxaase suuragal ah in laaluushna uu ku jiro.
Warbixinta waxay sheegeysaa in Kenya ay niyadda gashatay in kiiska badda uu yahay mid sahlan, madaama ay Soomaaliya u aragtay ‘dal guul-darreystay’ oo aan arrinta xajmigan leh maaro u heynin.
Sida ay warbixintu ka xiganeyso ilo dowladda ka tirsan, Kenya waxay muujisay doqonnimo billowgii muranka, waxayna iska dhaadhicisay inay lacag badan sameyn karto halkii ay danaha qaran ka fikiri lahaayeen, taas oo ka dhigan inay Kenya rumeysneyd in tababar-darrida Soomaaliya ay u sahli karto inay badda qaadato, dhaqaale badanna ka sameyso.
Wargeyska wuxuu qoray in haddii Kenya ay ku guul-darreysato dacwadda badda aysan ka dhigneyn in Soomaaliya ay bandhig wanaagsan la tagtay Maxkamadda Caddaaladda (ICJ), balse ay eersaneyso damac, hunguri weyni iyo karti-la’aan cuuryaamisay dedaalkeeda.
Hab-dhaqanka Kenya ee ku aaddan muranka badda ee ay ku dooneysay in looga baaqsado in arrinta Maxkamadda horteeda lagu dhameeyo ayuu wargeysku tilmaamay inuu ka muuqday rajo-beel, argagax iyo diyaar-garow la’aan halkii ay ka muujin lahayn ad-adeyg iyo kalsooni.
Diyaariye: Tahliil Colaad Xasan
Previous articleDHEGEYSO: Sweden oo uu ka socdo qorshe lagu mamnuucayo GUDNIINKA wiilasha! (Dood ka hor timid)
Next articleDHEGEYSO: Carruur la geeyay guriga nin horay carruur u kufsaday! (Muran ka taagan)